DHEGEYSO-Warbixin munaasabaddii gabagabada Tartan iyo Tacliin. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Warbixin munaasabaddii gabagabada Tartan iyo Tacliin.
Agoosto 5, 2016 2:35 b 0
Qarrdho, Aug 05 2016–Dugsiga sare ee Alwaaxa ee magaalada Garoowe ayaa xalay ku guulaystay barnaamijkii Tartan iyo tacliin, kaasi oo ay ku loolamayeen 30 kamid ah dugsiyada waxbarashada ee Puntland.
Munaasabad lagu soo xirayey tartankii kama dambaysta ahaa oo kadhacday jaamacadda Bariga Africa ee Qardho ayaa waxaa ka qaybgalay mas’uuliyiinta gobolka Karkaar, kuwa degmada Qardho, madaxda Daljir iyo Golis, tartamayaal iyo boqolaal daawadayaal ah.
Tartanka kama dambaysta ah ayaa waxaa sanadkaani isugu soo horay dugsiyada Al-waxa Garoowe iyo Al-azhar Qardho iyadoona uu dugsiga Al-waxa 10 dhibcood ku qaaday tartanka sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga Tartank, halka dugsiga kale ee Al-azharna uu helay 4 dhibcood.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Maanhadal iyo Doorashada Soomaaliya.